OnePlus Band waxaa lagu shaaciyey SpO2 sensor iyo ismaamul ilaa 2 toddobaad | Androidsis
OnePlus Band waxaa lagu shaaciyey SpO2 sensor iyo ismaamul ilaa 2 toddobaad ah
OnePlus wuxuu go'aansaday inuu ku dhawaaqo smartband-keedii ugu horreeyay kadib markii uu faafay sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya oo ah badeecad marka hore imaan doonta Hindiya. OnePlus Band waa wearal-sameeyaha ugu horreeya ee soo-saaraha Iyada oo naqshad durba la mid ah tan kooxo badan oo kale oo laga heli karo suuqa.
Kooxda OnePlus Band waxay siisaa madax-bannaani weynTan tan wuxuu ku darayaa xoogaa faa iidooyin ah oo ka dhigaya ikhtiyaar fiican haddii aad raadineyso wax aad siiso waqti kasta. Ka dib markii la aasaasay inay tahay mid ka mid ah shirkadaha soo saara taleefannada, waxaa lagu bilaabay qayb ka mid ah wuxuu sameyn doonaa wax ka badan hal weerar.
1 Kooxda OnePlus, oo ah koox loo sameeyay inay sii socoto
2 Ilaa 13 nooc oo isboorti ah iyo warar kale
Kooxda OnePlus, oo ah koox loo sameeyay inay sii socoto
Sida qodob xusid mudan OnePlus Band wuxuu ku ballanqaadayaa 100 mAh ismaamul ahaan 14 maalmood isticmaalka iyadoo aan la saarin xamuul hore, ama waxa la mid ah, laba toddobaad oo isticmaalka caadiga ah. Kharashka kiiskan waxaa lagu fulin doonaa wareegga, sidaas darteed waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la soo saaro oo lagu xiro isku xiraha sanduuqa yimaada.
OnePlus Band wuxuu isku daraa shaashad midabkeedu yahay 1,1-inji AMOLED Iyadoo lagu xallinayo 126 x 294 pixels, wanaagsan ayaa ah inay bixiso aragti wanaagsan oo ay ugu mahadcelineyso tikniyoolajiyaddan. Iftiinka waa la hagaajin karaa, sidaa darteed adiga ayay kugu xiran tahay inaad sida ugu fiican uga samayso xaalad kasta, gaar ahaan qorraxda. Waxay leedahay 37 qaabab dial oo kala duwan.
Kudar dareeraha garaaca wadnaha, dareeraha SpO2, xawaare-cabbiraha iyo gyroscope, iska caabbintu waa IP68 biyaha dhexdoodana waxay ku haysaa sida caadiga ah kooxahaas, qiyaastii 5 ATM. Isku xirnaanta waxay ku socotaa in lagu rakibo Bluetooth 5.0 si loogu xiro aaladda mobilada, kaliya isticmaal arjiga ay tahay inaad soo dejiso markii aad ka soo saarto sanduuqa.
Ilaa 13 nooc oo isboorti ah iyo warar kale
The OnePlus Band wuxuu ku darayaa dhibic dheeri ah, waxaan heysanaa ilaa 13 qaabab isboorti kala duwan: Socodyo-tallaabo tallaabo ah, socod isdaba joog ah, oo wata baaskiil iyo 10 mid oo kala duwan. Waxay la jaanqaadi doontaa hadba baahida qofka waxayna ku habboon tahay jimicsiga haddii aad samaynaysid jimicsi dhammaan noocyada ah.
OnePlus waxay ku dartay Band suurtogalnimada inaad ka hesho dhammaan noocyada ogeysiisyada ka soo baxa terminalkaaga illaa jijin, alaarmiga ama muusigga loo maqli karo. Waxay kaloo leedahay saacad-saacad iyo saacad, sidaa darteed waxaan wajaheynaa jijin aan shaki ku jirin inuu dhameystirmay qiimaha gaaraya suuqa Hindiya.
Dheeraadkeeda ma aysan u baahneyn ikhtiyaarro kale oo kala duwan sida raadinta taleefankaaga, Zen Mode oo ay ku jirto iyo ikhtiyaarka aad ku ogaan karto waqtigaas. Kooxda OnePlus Waxay ballanqaadaysaa inay noqoto koox dhan-ka-mid ah oo had iyo jeer gacanta ku qaadata oo ku habboon dhammaan noocyada xaaladaha.
MUUQAAL AMOLED 1.1 inji oo xaddigiisu yahay 126 x 294 pixels
BATARY 100 Mah / Muddada la qiyaasay ee qiyaastii ah 14 maalmood
Isku xirnaanta Bluetooth 5.0
DULQAADASHO IP68 / 5 ATM caabbinta biyaha
SENSORS SpO2 / Sensor Wadnaha / Accelerometer / Gyroscope
ISKU DUWAN Nooca Android 6.0 ama ka sareeya
SOFTWARE Waxay leedahay qaabab isboorti oo 13 ah / Qaylodhaan / Ogeysiisyo / Dib u maqal maqal / saacad-saacadeed / Waqti / Waqti / Xaalad Zen / Xulasho si aad telefoon uga hesho
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 40.4 x 17.6 x 11.95 / 22 garaam
Kooxda 'OnePlus Band' ayaa laga bilaabay xilligan India, Halka ay mar horeba la heli karo si loogu iibsado qiyaastii INR2,799, oo ku saabsan 31 euro isbeddelka, inkasta oo ay jiri doonaan dalab hordhac ah oo loogu talagalay INR2,499 (27 euro). Waxaa jira ikhtiyaar lagu iibsado suun ka duwan INR399 (4,50 euro), oo lagu heli karo madow, cawl-liin iyo buluug.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » OnePlus Band waxaa lagu shaaciyey SpO2 sensor iyo ismaamul ilaa 2 toddobaad ah
Maamulaha Telegram wuxuu cadeeyaa: hadaad rabto asturnaansho iyo xorriyad, ka tag Apple oo sharad ku dhig Android